Ugu yaraan 20 qof oo ku dhintay dagaal qaraar oo ka dhacay Guriceel
Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 40 ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaal magaalda Guriceel saakay ka qarxay oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo isku dhinac ah iyo ciidamada Ururka Ahlu Sunna Waljameeca.
Saraakiil ay VOA la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka soo xigannay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askarta dhinacyaddii dagaalamay.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaase VOA u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda ay dagaalka kaga dhinteen saddex askari, dhowr iyo toba kalena ay uga dhaawacmeen.
Dadka dagaalka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah taliyihii ciidanka Danab ee Galmudug, iyo askar kale oo ka tirsan ciidamada, sida ilo kala duwan u xaqiijiyeen VOA.
Xiriir ay VOA la sameeysay madaxda Ahlu Sunna si ay dhinacooda uga hadlaan dagaalka ayeysan ka jawaabin.
Halkan ka dhageyso warbixinta Guriceel
Warbixin: Khasaaraha dagaalkii ka Qarxay Guriceel
Magaalada Guriceel ayaa waxaa gabalku ugu dhacay ka dib saacado badan oo dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday uu ka socday.
Weli ma jirto cid isku dayeysa in ay kala dhex gasho labada dhinac oo dhowr jeer horey loogu guul dareystay in lagu qanciyo in ay wadahadal ku dhameeyaan khilaafkooda si looga baaqasado colaad uu dhiig badan ku daato.